I-Mizuno MX-17 Iimons: Iimpawu zeNqobo kunye nexabiso elisebenzisiweyo
Iimpawu ze-MX-17 ze-Mizuno ze-MX-17 zafakwa kwiimarike zentengiso ngo-2004. Ngelo xesha, iMizuno, mhlawumbi yayiyaziwa ngokugqithiseleyo ngeentsimbi eziqingqiweyo ezijoliswe ku-golf-handicapers. Kodwa i-MX-17 yeetoni zibeka ingqalelo kwi - teknoloji yokuphucula i-game , kwaye ke ijoliswe kuluhlu olubanzi lwabagadi begalufa.
Kwaye zazingqineka kakhulu kwiigalufu emhlabeni jikelele. Enyanisweni, kwanamhlanje, ixesha elide emva kokuba uMizuno ayeke ukuvelisa kwaye ekupheleni kweminyaka elishumi yokuphila, iinqwelo ze-Mizuno MX-17 ziyaqhubeka zithengisa kwimarike yesibini.
UMizuno wayeka ukwenza ii-MX-17 iisethi xa inkampani yazisa i-MX-19 irons ngo-2006.
Iimpawu ze-Mizuno MX-17 Irons
Xa i-MX-17 i-irons yaziswa ngo-2004, uMizuno wababiza ngokuthi "iindawo ezixolela kakhulu iinkampani eziye zazenza." (I-MX-17 iboniswe ngokucacileyo ukususela kwimijelo ye-Mizuno yakutshanje kwaye yangoku.)
Iintloko zeensimbi ze-MX-17 zakhiwe ngensimbi engenasici kwaye zenzelwe ukudala indawo ephantsi kakhulu kunye nezulu elinzulu. Oku kwafezwa kwinxalenye yodwa; Ezinye iimpawu zokulinganisa iiperimeter zazibandakanya umgca ophezulu.
Kuthengiswa nguMizuno njenge "yintsimbi epheleleyo kwi-golfer ephezulu-midlalo," ezinye iimpawu eziphambili zokuphucula umdlalo zibandakanya umlinganiselo onobubele kunye nebala elimnandi kwi-clubface.
Bakhelwe ukunceda abadlali begalufu bafumana ibhola lihamba nge- angle ephakamileyo, ngelixa lihlala livakalelwa kwaye lilawula; kunye nokubonelela ukuxolela ngaphezulu phakathi kwababini kunye nabaphezulu.
Iinqwelomoya ze-MX-17 ziquka indawo ephakamileyo yepokheji kwiimfono ezide (3-isinyithi nge-6-iron) eshukumisa isisindo kude kunye nobuso. Kulo-7-intsimbi ngokufaka i-wedge, i-MX-17 inomgca onzulu kunye noko uMizuno abiza ngokuba "amandla okuqulunqwa kwamandla kwinqanaba" -kujoliswe ekunikeni uvakalelo oluqinileyo kunye nokulawula okuchanekileyo.
Iingxube ezongezelelekileyo zongeza ubuninzi ezantsi kweeklabhu, ezibanceda abadlali begolfu bafumana ibhola phezulu emoyeni kunye nokwandisa ukudlala kwiindawo ezahlukeneyo. Ukugqitywa yi-nickel double chrome.
I-MX-17 Intengo - Emva koko kunye neNje
Xa zaziswa ngo-2004, iinqwelo ze-Mizuno MX-17 zine- MSRP ye-$ 699 yeesethi kunye ne-shafts yerhwebo kunye ne-799 yee-array kwi-shaft ne-shafts. Iiseti ezisetyenzisiweyo zingatholakala kwi-Amazon.
Iiseti ezisetyenzisiweyo ze-MX-17 zisesimweni esihle kwaye zithengiswa nge-shafts zensimbi, ngo-2015, kummandla we-$ 100 ukuya kwii-130 zama-130, ngaphezulu kwiiseti ezisekhohlo. Isethi esenziwe ngama-graphite shafts kungenzeka ukuba iphindwe kabini loo maxabiso.
Ukuba usemakethe asetyenzisiweyo, qiniseka ukuba ukhangele ntoni ukujonga ngaphambi kokuthenga iiClubs zeGolf .
Ukuthenga iPaire Yakho YokuQala yeSatifikethi se-Ice
Ngaba iiglovu ze-Ski Boot zisebenza ngokwenene?
TaylorMade r7 I-Steel kunye ne-r7 Ti Fairway Woods
Ukuphononongwa kweeScott Freestyle Skates
Ukuhlaziywa: Umqhubi we-Cleveland Launcher
I-Eras enkulu yeMbali yamandulo yamaYuda
I-American Revolution: I-Battle of Savannah
Ubani Ongumdali Wendalo weBatman?
Intsimbi kwiNguqulelo yezoPhuhliso
ISikhumbuzo esiPhikisana noMartin Luther King, uJr.
Iindlela ezingama-20 zokwenza u-Eva unyaka omtsha kwiKholeji
Ezi ngxakusho zeMadala eziMangalisayo zilondoloziwe Usuku!
Awuyi Kukholelwa Ezi Zithintelo Ezihlambulukileyo Ukukhethwa KweeLines Eqinisweni Kusebenza
Icandelo eliSiseko leBongo kunye noxanduva lwabo
I-SAT Izikolo zokungeniswa kwiIyunivesithi ye-Sun ye-Atlantic